Oru oma One-stop Procurement nke Electronics Components
International lọjistik Nchekwa Center
Zuru okè Quality Control System
Ọdụdọ njikọ, a ngwaọrụ maka ijikọta eletriki na sekit na sekit ọnụ (mgbe ụfọdụ mara dị ka ọdụ ụgbọ mmiri, plọg, ma ọ bụ ihu). Anyị nwere njikọta niile ụdị, gụnyere D-sub, eriri optic, akpakanamde, okirikiri, ọdịyo na video, RF, telecom, ike, na USB. Anyị na-ebu nnukwu nhọrọ nke njikọ ọnụ na ọnụ nkanka, nakwa dị ka backshells na ngwa niile ụdị.
Female nkụnye eji isi mee
nkụnye eji isi mee njikọ
Optical Fiber njikọ
Short-circuit Onye ndu
Ọnụ Block njikọ
USB Type-C njikọ
XIDA Electronics ịzụ ahịa a nnukwu nhọrọ nke ebe nchekwa ibe, kaadị, na pụrụ iche na ebe nchekwa modul maka ọ bụla ngwa, gụnyere ROM ibe na Ram na DRAM ibe nke ọ bụla iche iche, Flash kaadị, FIFO, ebe nchekwa modul na ndị ọzọ.
Họchaa site na ike, data ụgbọ ala obosara, ohere oge, ọrụ voltaji, nkwakọ, pin ọnụ na ndị ọzọ. Chọta ebe nchekwa na ngwaahịa a dịgasị iche iche nke interface na ụdị na-agụ / dee ọrụ choro, gụnyere jupụtara na nkume na ebe nchekwa mmiri. Anyị ngwaahịa ebe nchekwa ngwaahịa adabara sava, onye Mgbakọ, residential, azụmahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ngwa, na ndị ọzọ.
Programmable mgbagha ngwaọrụ
A programmable mgbagha ngwaọrụ (PLD) bụ electronic akụrụngwa na-eji na-ewu reconfigurable digital sekit na sekit. N'adịghị ka a dịghị ụzọ ámá, nke nwere a ofu ọrụ, a PLD nwere undefined ọrụ n'oge nke rụpụta. Tupu PLD ike ga-eji na a circuit ọ ga-kenyere, ya bụ, reconfigured.
4000 Series Logic Mgbawa
74 Series Logic Mgbawa
CPLD / FPGA Mgbawa
Oge Base Integrated Mgbawa
Power Management Integrated na sekit na sekit
Power management ike na sekit na sekit (ike management ICS ma ọ bụ PMICs ma ọ bụ PMU dị ka unit) bụ integrated na sekit na sekit (ma ọ bụ a usoro ngọngọ ke a usoro-on-a-mgbawa ngwaọrụ) maka ijikwa ike chọrọ nke usu usoro. N'ihi ya PMIC na-ezo aka a dịgasị iche iche nke ibe, Otú ọ dị ọtụtụ na-agụnye ụdị ụfọdụ nke electronic ike akakabarede na / ma ọ bụ mkpa ike akara ọrụ. A PMIC a na-gụnyere na batrị-ejikwara ngwaọrụ dị ka mobile phones na obere media Player ibelata ego nke uwa chọrọ.
dabara n'usoro dịka
Battery echebe Mgbawa
DC-DC Power modul
Linear regulator Mgbawa
Power Nyochaa Mgbawa
Ịmafe Power Management Mgbawa
Voltaji Reference Mgbawa
Analọg mgbawa bụ a set nke miniature electronic analọg sekit kpụrụ otu mpempe okporo ọkụ ihe.
The voltaji na ugbu a na kwuru kpọmkwem ihe na sekit na sekit nke analọg ibe ịdị iche iche nọgidere na oge. N'ụzọ dị iche, digital ibe naanị iji na ike voltages ma ọ bụ okwukwo na pụrụ iche na-etoju, na-enweghị n'etiti ụkpụrụ. Ke adianade Transistors, analọg ibe-emekarị nwere ibu ọnụ ọgụgụ nke n'ezinụlọ ọcha (Inductor / Capacitors / Resistors) karịa digital ibe a na-eme. Inductors agbasaghị ẹse n'ihi na ha nnukwu size, na a transistor na capacitor ọnụ nwere ike ime ọrụ nke onye na inductor. (Mgbe usoro a na-eji na a CFL, ị na electronic dị arọ.)
Analọg ibe nwere ike ịnwekwa digital mgbagha ọcha dochie ụfọdụ analọg ọrụ, ma ọ bụ na-ekwe ka mgbawa-ekwurịta okwu na a microprocessor. N'ihi nke a, ebe mgbagha na-ọtụtụ ndị na-emejuputa atumatu iji CMOS technology, ndị a ibe iji BiCMOS Filiks site na ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka Freescale, Texas Instruments, STMicroelectronics na ndị ọzọ. Nke a na-mara dị mbuaha mgbaàmà nhazi na-enye ohere a mmebe na-amuma usoro ọzọ ọrụ na mgbawa. Ụfọdụ n'ime uru ndị na-agụnye ibu nchedo, belata akụkụ ịgụ na elu pụrụ ịdabere.
Pure analọg ibe ke ọmụma nhazi e ukwuu n'ime dochie digital ibe. Analọg ibe ka na chọrọ maka wideband n'ókè n'ihi nlele ọnụego chọrọ, elu ike ngwa na na transducer ihu. Research na ụlọ ọrụ na ubi na-aga n'ihu na-eto eto na-enwe ọganihu. Ihe atụ ụfọdụ nke ogologo ndụ ya na-a maara nke ọma analọg ibe bụ 741 arụmọrụ ampilifaya, na 555 ngụ oge.
Ike ọkọnọ ibe na-atụle ga-analọg ibe. Ha isi nzube bụ na-emepụta a na-usoro mmepụta voltaji ọkọnọ maka ndị ọzọ ibe na usoro. Ebe niile kọmputa usoro achọ eletriki ike, ike ọkọnọ ICS PMICs bụ mkpa nke ndị na usoro.
Obere-na sekit na sekit
A / D Nchigharị Mgbawa
Analọg Gbanye Mgbawa
Ugbu Nyochaa Mgbawa
D / A Nchigharị Mgbawa
Digital Potentiometers Mgbawa
Na ngwá electronic na ọkụ eletrik, a fuuz bụ ihe ọkụ nchekwa na ngwaọrụ na-arụ ọrụ na-enye n'elu ugbu a nchedo ihe ọkụ circuit. Ya mkpa akụrụngwa bụ a metal waya ma ọ bụ warara na-agbaze mgbe ukwuu ugbu a aga site na ya, si otú interrupting nke ugbu a. Ọ bụ a chụọ àjà ngwaọrụ ahụ; ozugbo a fuuz ka ejikwara ọ bụ ihe na-emeghe circuit, na ya ga-anọchi ma ọ bụ rewired, dabere na ụdị.
Fuuz e ji dị ka oké mkpa nchekwa ngwaọrụ site na mmalite nke ọkụ eletrik. Taa, e nwere ọtụtụ puku ndị dị iche iche fuuz aghụghọ nke nwere kpọmkwem ugbu a na voltaji ratings, na-agbasa ike na nzaghachi ugboro, dabere na ngwa. The oge na ugbu a na-arụ ọrụ e ji mara fuuz na-họọrọ ka-enye ezigbo nchedo enweghị enweghị isi nkwụsị. Wiring ụkpụrụ na-emekarị kọwaa a kacha fuuz ugbu a fim maka otu na sekit na sekit. Short na sekit na sekit, overloading, mismatched ibu, ma ọ bụ ngwaọrụ ọdịda bụ praịm ihe mere fuuz ọrụ.
A fuuz bụ akpaka n'aka nke wepụ ike site a na-ezighị ezi usoro; mgbe abbreviated ka mgbasa ozi (Automatic Disconnection nke Tụkwasịnụ). Circuit Oké mmali ike ga-eji dị ka onye ọzọ imewe ngwọta fuuz, ma budata dị iche iche e ji mara.
Fuuz Clip / Seat
Glass tube gwakọta
Nnennen nkwụnye gwakọta
Elu Mount gwakọta
Audio Interface Mgbawa
RS-485 / RS-422 Mgbawa
Ikuku na-ebunye-enweta Mgbawa
An ampilifaya bụ kọmputa ngwaọrụ na enwekwu ndị njupụta nke ihe ọkụ mgbaàmà. Ha na-categorized na-akwanyere ha nwere ike n'ụzọ dị irè-ikowa ma a voltaji ma ọ bụ ugbu a ọsọ ọsọ mgbaàmà. A voltaji ampilifaya eme ka input voltaji n'ókè ma na-amị a ibu mmepụta voltaji. Ugbu amplifiers, makwaara dị ka transimpedance amplifiers, chọpụta okwukwo na ntinye, na mmepụta a voltaji ka ibu. Transconductance na Transresistance amplifiers gbanwee otú a - ihe input voltaji ma ọ bụ ugbu a na-arụpụta a ibu mmepụta ugbu a ma ọ bụ ụcha ọkụ karị.
Otu isi arụmọrụ oke nke ihe ampilifaya bụ ya linearity, ma ọ bụ ya ike n'ụzọ ziri ezi na-anọchi anya input na otu udi mgbaàmà na oge domain na mmepụta. Ndị ọzọ na igodo arụmọrụ kwa-agụnye gburu ọnụego, ugboro ole nzaghachi, mkpọtụ, na uru bandwit.
Amplifiers na-nkewa dị ka A, AB, B, C, D na E. The klas na-anọchi anya ego nke mgbanwe ihe mmepụta mgbaàmà nwere ihe karịrị otu okirikiri ma ọ bụrụ na ndenye bụ a sinusoidal waveform. The ọzọ linear ihe ampilifaya bụ, ala ndị distortion ngwaahịa. Class A bụ ihe kasị linear na klas C bụ onye kasị nta linear. Class C bụ adabara audio ngwa na a na-eji na ngwaahịa dị ka RF transmitters. Klas D na E na-ịmafe amplifiers na ike ahu nagide mmepụta circuit nkebi nwere harmonic resonators, multiple ọkọnọ okporo ígwè ịmafe, ekele mmepụta usoro, na PWM na Delta-sigma mgbanwe olu ntọt arụmọrụ na mepụtaghachi ndenye waveform na mmepụta.
dị iche ampilifaya
General arụmọrụ ampilifaya
High Speed ​​Wide Band arụmọrụ ampilifaya
Instrumentation arụmọrụ ampilifaya
Low-Noise arụmọrụ ampilifaya
Low-Power arụmọrụ ampilifaya
Nkenke arụmọrụ ampilifaya
Keyswitches / ezigara
A keyswitch bụ ụdị obere mgba ọkụ na-eji maka igodo keyboards. Ndị a bụ ugbu a n'ụzọ dị ukwuu nke ojiji ruru ka kasị oge a keyboards iji Ibé akwụkwọ nke plastic na kọntaktsị na ha
Key mgba ọkụ a na-eji na-akọwa a mgba ọkụ ejikwara site a isi, na-eji na osi mkpu na sekit na sekit. A ụgbọ ala mgbanye bụkwa a mgba ọkụ nke ụdị.
Relays bụ electromechanical switches na ike ga-actuated site ihe ọkụ mgbaàmà kama site na aka na-emeghe ma ọ bụ na-emechi gbanwe. Nke a obere mgbaàmà-eme dị ka a nche ọnụ maka a ọtụtụ ibu eletriki mgbaàmà. The ike nwere ala-na-ike-achịkwa a elu-ike mgbaàmà bụ ihe na-eme ka ha dị otú ahụ a ma ama na eletriki mmiri.
Transistors bụ atọ ọnụ ngwaọrụ nwere ike bipolar nkwụsị (BJT) ụdị, ma ọ bụ karịa ọtụtụ ndị na-dị ka otu ụdị metal-oxide-okporo ọkụ (CMOS). Ha na-kere n'akụkụ n-ụdị na p-ụdị Semiconductors na ma ndị PNP ma ọ bụ NPN nhazi. A a voltaji na-etinyere a n'ọnụ ụzọ ámá ọnụ ikwe ugbu ndiwet site ngwaọrụ ebe transistor ọrụ yiri nke ahụ, ka a mgba ọkụ. Ha na-eji digital usoro iji mejuputa mgbagha ọnụ ụzọ ámá na ụlọ ahịa data. Analọg na sekit na sekit na-eji ha mepụta amplifiers na oscillators.
A diode bụ a abụọ ọnụ ngwaọrụ nke dị n'ebe ọ bụla p-ụdị na n-ụdị Semiconductors na-ozugbo adjoined ọ bụla ọzọ. Ime a mma voltaji na anode agaghị emepụta ọ bụla dị ịrịba ugbu a ruo mgbe diode si fọrọ voltaji na-karịa. Ozugbo fọrọ voltaji na-karịa ugbu a ga-ekwe ka igba si anode na cathode ma diode ga-egbochi ugbu a eruba si cathode na anode n'okpuru kasị ọnọdụ. Ha na-eji AC-DC nkesa, redio, electro-static orùrù (ESD) na sekit na sekit, dị ka ìhè na isi mmalite, wdg
agbapụta n'ahụ Diode
High voltaji Diode
Anyị nwere resistors niile ngwa gụnyere otu n'elu ugwu, otu site onu, trimmers, potentiometers na rheostats, nakwa dị ka a dịgasị iche iche nke ngwa iwu, netwọk na arrays, na ndị ọzọ ngwa.
A resistor bụ a n'ezinụlọ eletriki akụrụngwa na-egbochi ma ọ bụ achịkwakwa eruba n'ime ọkụ ugbu a site na a circuit. The ugbu a na gbakọọ via Ohm iwu: V = Iye. Eguzogide uru, ndidi, na mgbe ụfọdụ ọbụna na okpomọkụ ọnụọgụ nwere ike kpebisie site n'ịgụ agba koodu, gosiri site a usoro nke acha agbụ n'akụkụ akụrụngwa.
Resistors ike ga-eji na-amachi ugbu a eruba site a diode na kwụsị a nnyefe akara na gbochie reflections. Abụọ nwere ike iji ike a voltaji divider na-arụpụta ihe mmepụta voltaji proportional ndị na-eguzogide ụkpụrụ. A general-nzube input / mmepụta (GPIO) transceiver nwere ike inwe ya mmepụta setịpụrụ a nnukwu esiri-elu ma ọ bụ sere-ala resistor na overridden mgbe GPIO-arụsi ọrụ ike.
Resistors na-kere iji a dịgasị iche iche nke ihe, gụnyere carbon mejupụtara, carbon film, metal film, na waya ọnya. Consumer electronics chọrọ ka ha na-abụ obere ma kpọmkwem, ebe ulo oru ngwa nwere ike ịchọ ka ha ịbụ ndị ruru eru nke dissipating nnukwu ichekwa ike, ya mere ha ejedebe ịbụ ibu.
Ugbu N'ịchọpụta Resistor
Direct nkwụnye mwepu
Ikanam Oriọna Resistor
Metal gbazere Resistor
Dara Film Resistor
N'akwa Ultra-ala-emegide Resistor
Nkenke Kemeghi Nguzogide
Thin Film nkenke Mgbawa Resistor
Waya ọnya Resistor
Ome uzu / Ọkà Okwu / MAỊ
A ome uzu ma ọ bụ beeper bụ ọdịyo na-agba ama ngwaọrụ, nke nwere ike ịbụ n'ibu, electromechanical, ma ọ bụ piezoelectric (piezo maka obere). Ahụkarị nwaanyị nke buzzers na beepers gụnyere mkpu ngwaọrụ, Ngụọge, na nkwenye nke onye ọrụ input dị ka a òké click ma ọ bụ keystroke.
Ọkà Okwu bụ electromechanical ngwaọrụ nke na-amịpụta ụda. Ọ na-agụnye Computer ọkà okwu, Digital ọkà okwu, Electrostatic okwusike, Full-nso okwu, Horn okwusike, Okwusiike, Magnetostatic okwusike na na.
Igwe okwu bụ onye ike Ntụgharị na-atọghata ụda n'ókè n'ime eletriki n'ókè.
An electric batrị a ngwaọrụ esịnede otu ma ọ bụ karịa electrochemical mkpụrụ ndụ na mpụga njikọ nyere ike eletriki ngwaọrụ dị ka flashlights, smartphones, na electric ụgbọala.
Batrị na-abịa ọtụtụ shapes na nha, si miniature sel iji ike ịnụ ihe na wristwatches ka obere, na mkpa mkpụrụ ndụ eji smartphones, na nnukwu-edu ndú acid batrị eji na ụgbọala na gwongworo, na na ndị kasị ibu ókè, nnukwu batrị anoghi n'ulo oba na size of ụlọ na-enye na nọrọ na njikere ma ọ bụ mberede ike maka ekwentị mgbanwe na kọmputa data emmepe.
Battery Igbe / Battery isi
Capacitors bụ a n'ezinụlọ eletriki akụrụngwa na abụọ ọnụ na-echekwa akpa ike n'ụdị ihe electric ubi. Ọnụ jikọọ abụọ conductive efere nwere a dielectric ihe onwunwe n'etiti ha. Ha na-echekwa ihe electric ụgwọ na ha conductive efere. The ebubo efere iche iche site na dielectric ihe ịmepụta otu electric ubi.
Capacitance bụ a oke nke a capacitor na-egosi na ego nke echekwara electric ụgwọ a nyere voltaji etinyere ya ọnụ. Ọ tụrụ na farads (F). Ka ihe atụ, ibawanye capacitance ga abụọ echekwara electric ụgwọ (n'ihi na a nyere mgbe nile voltaji na ọnụ).
Capacitors na-nkewa dabeere na anụ ahụ ihe na-eji maka atọ oyi akwa eduzi dielectric eduzi Ọdịdị. Ka ihe atụ, ndị na-metal dielectric electrolyte ihe na-akpọ electrolytic capacitors; metal seramiiki metal na-akpọ seramiiki capacitors, wdg Ndị na-na-na-abụghị-ekewasị nwere ike jikọọ ma ebughi voltaji. Ọ bụrụ na ha na-ekewasị ha ga-ejikọrịrị a mma voltaji, na mma ọnụ na-akara na nkwakọ.
High voltaji Capacitor
Monolithic Efere Capacitor
Multilayer Efere Capacitor
Kwachie Electrolytic Capacitor
A crystal oscillator bụ electronic oscillator circuit nke na-eji n'ibu resonance nke a jijiji crystal nke piezoelectric ihe ike ihe ọkụ mgbaàmà na a kpọmkwem ugboro. Nke a ugboro ole a na-eji na-esochi nke oge, dị ka na quartz wristwatches, inye a ufọk ufene elekere mgbaàmà maka digital integrated na sekit na sekit, na ime ka iku frequencies maka radio transmitters na receivers. The kasị ụdị piezoelectric resonator mee bụ quartz crystal, ka oscillator sekit incorporating ha bịara mara dị ka crystal oscillators, ma ndị ọzọ piezoelectric ihe gụnyere polycrystalline ceramik na-eji yiri na sekit na sekit.
A crystal oscillator, karịsịa onye mere nke quartz crystal, na-arụ ọrụ site na-ekpu ihe electric ubi mgbe voltaji na-etinyere na electrode nso ma ọ bụ na crystal. Nke a ihe onwunwe a maara dị ka electrostriction ma ọ bụ inverse piezoelectricity. Mgbe ubi a na-ewepụ, na quartz - nke oscillates na a kpọmkwem ugboro - site electric ubi dị ka ọ na-alaghachi ya gara aga udi, na nke a nwere ike n'ịwa a voltaji. N'ihi na a quartz crystal na-akpa àgwà dị ka ihe RLC circuit.
Quartz kristal na-arụpụtara maka frequencies si a ole na ole iri puku kwuru iri kilohertz ọtụtụ narị megahertz. Karịrị abụọ ijeri kristal na-arụpụtara kwa afo. Ọtụtụ na-eji n'ji ngwaọrụ dị ka wristwatches, clocks, redio, kọmputa, na cellphones. Quartz kristal na-hụrụ n'ime ule na n'ihe ngwá, dị ka counters, mgbaàmà generators, na oscilloscopes.
Sịlịnda Crystal Oscillator
N'akwa Active Crystal Oscillator
N'akwa n'ezinụlọ Crystal Oscillator
Inductors / Magnetik Kpụrụkpụrụ Ọlamma / nkesa
An inductor, na-akpọ a eriri igwe, ịkpagbu ma ọ bụ chernobyl, bụ a n'ezinụlọ abụọ ọnụ eletriki akụrụngwa na-echekwa ike na a ndọta mgbe eletrik aga site na ya. An inductor a mejupụtara ihe gwara mmanụ waya ọnya n'ime a eriri igwe gburugburu a isi.
Magnetik chaplet na-e-ebelata elu ugboro ụzụ na ọgọ nnyonye anya na mgbaàmà edoghi, ike e, na-etinye obi ha dum electrostatic pulses. Magnetik chaplet na-eji banye UHF n'ókè, dị ka ụfọdụ RF na sekit na sekit, PLL, oscillating na sekit na sekit, na àjà ihe ọṅụṅụ elu ugboro ebe nchekwa na sekit na sekit (DDRSDRAM, RAMBUS, wdg), nke mkpa ka ịgbakwunye magnetik chaplet na input akụkụ nke ike ọkọnọ. The magnetik bead elu resistivity na permeability, nke bụ Ẹkot ukem-eguzogide ma na inductance, ma ndị na-eguzogide uru na inductance uru ịdị iche iche na ugboro.
Nkesa bụ nanị abụọ inductors na ike ibe njikọ dị n'etiti ha. Kwụpụ-ala nkesa belata voltaji si input ike isi iyi na njupụta na bụ obere ize ndụ ma na-ọzọ bara uru na oru na ezinụlọ. Kwụpụ-up nkesa dịkwuo voltaji maka ihe oma nnyefe karịrị anya nke ike e. Nkesa dị oké mkpa nkesa AC ike.
Mgbawa Magnetik bead
Common Mode ịkpagbu
Direct Magnetik bead
Akwara na Mita
XIDA electronics-agba mbọ ka inye ihe otutu na-akparaghị ókè n'ụwa ọzọ dị iche iche ahịa na-eri-irè technology ngwaahịa. anyị ọma ulo oru na zuru ụwa ọnụ ahịa nke dijitalụ multimeter, akpakanamde instrumentation, eletriki ule ngwá, gburugburu ebe obibi-echebe ma na thermal analysis instrumentation, nchekwa instrumentation, general tester, n'ihe na mmezi ngwá na digital nchekwa oscilloscopes na ndị ọzọ na 10 a dịgasị iche iche nke isi edemede nke ngwaahịa, na-anọgide na-eme ka usoro nke ngwaahịa diversification, na n'ụzọ zuru ezu izute pụrụ iche mkpa nke dị iche iche ahịa.
Circuit emebi funahụrụ
Akụrụngwa Testing Tools
DC Power ọnọde
Digital mwekota Mita
Digital Nchekwa Oscilloscopes
Ọdụdọ Nwụnye Testers
Ọdụdọ Power Tools
Handheld Digital Nchekwa Oscilloscopes
Industrial Digital mwekota Mita
Industrial Ezi RMS Multimeters
Okirikiri nhọrọ ukwuu na mmesho Tools
ụdịdị dị iche iche Analyzers
Voltaji na continuity Testers
Sensọ n'ozuzu ịdaba otu n'ime ihe anọ ige:
A mgbali mmetụta a jikoro nsogbu gas ma ọ bụ mmiri mmiri. Ha na-arụ ọrụ site na-amụba ihe electronic mgbaàmà dị ka a n'ihi nke mgbali eme ka a ọrụ nke ike na a chọrọ iji kwụsị a ọmụmụ ma ọ bụ gas site ịgbasa. Pressure sensọ na-na-mgbe na-akpọ mgbali transducers, nrụgide transmitters, piezometers na nsogbu na-egosi, ihe ndị ọzọ aha. Ha na-ejikarị na-achịkwa na nlekota ngwa.
Motion na Position sensọ
A ngagharị na ọnọdụ mmetụta na-enye ohere maka n'ihe nke ọnọdụ, ma na zuru okwu (zuru ọnọdụ mmetụta), ma ọ bụ na ikwu okwu (ikwu ma ọ bụ Ndahie mmetụta). Motion ma ọ bụ ọnọdụ sensọ nwere ike tụọ linear ọnọdụ nke a ngwaọrụ (linear ọnọdụ mmetụta), angular ọnọdụ mgbanwe, nakwa dị ka multi-axis ọnọdụ mgbanwe. Otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na ojiji na Wearables na handheld IoT na ngwaọrụ ndị accelerometer na gyroscope sensọ.
Optical sensọ tọghata a ìhè, ma ọ bụ a gbanwee ìhè, n'ime otu kọmputa ọkọlọtọ nke na-bụ nke ogugu site na ngwá. Ndị a sensọ, na-akpọ photoelectric sensọ, bụ mgbe ahụ ike ikpebi na-adị na positional ọnụnọ nke ihe. Optical sensọ na-eji a dịgasị iche iche nke ulo oru na akpaaka ngwa nakwa dị ka azụmahịa na ngwaahịa. N'etiti ndị kasị ewu ewu bụ eriri optic sensọ, idi nso sensọ, na nchekwa ìhè ákwà mgbochi sensọ.
kwes sensọ bụ ngwaọrụ ndị na-amị ihe ọkụ mgbaàmà omume okpomọkụ ma ọ bụ a gbanwee okpomọkụ. Ha na-integral maka ulo oru ngwa na-achọ feeback ịnọgide na-enwe ihe ezigbo okpomọkụ na-arụ ọrụ nso. Ọ bụla n'elu-okpomọkụ agụ nwere ike mgbe ahụ ime ka shutdown nke igwe ịgbatị ndụ ma na-enwe a mma-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi. The isi ihe abụọ na ụdị nke kwes sensọ bụ okpomọkụ sensọ na iru mmiri sensọ.
Okpomọkụ ma na iru mmiri mmetụta
Ọkwọ ụgbọala na-raara onwe ya nye transmitters. Ha na-kachasị maka na-akwọ ụgbọala a akpan akpan technology ezinụlọ ma ọ bụ nkwurịta okwu ọkọlọtọ na mfe imewe nke a ibu usoro site na mmejuputa atumatu niile mkpa ogbugba ndu na ọkụ chọrọ. Ka ihe atụ, ihe Ikanam ọkwọ offloads elu ugbu a iyi / sink choro si CPU / AP GPIOs na na na ọkwọ ụgbọala akụrụngwa. Interface mmiri nwere ike ịnwe ọkwọ ụgbọala na receivers (transceivers), nke bụ vasatail mmiri na ike ga-eji na-mejuputa a nkwurịta okwu na netwọk ma na-eme dị ka repeaters.
High Ugbu Driver
Agbakwunyere elu ibe
MCU Monitoring Mgbawa
Port Extension mgbawa
Real-oge Elekere Mgbawa
Optocoupler / ikanam
Na ngwá electronic, ihe opto-isolator, na-akpọ ihe optocoupler, photocoupler, ma ọ bụ ngwa anya isolator, bụ a akụrụngwa na Nyefe eletriki n'ókè n'etiti abụọ dịpụrụ adịpụ na sekit na sekit site na iji light.Opto-isolators gbochie elu voltages si emetụta usoro na-anata signal.Commercially dị opto-isolators idi input-to-mmepụta voltages ruo 10 kVand voltaji transients na gbapụrụ ọsọ ruo 25 kV / μs.
A ụdị opto-isolator mejupụtara ihe ikanam na a phototransistor ke otu opaque ngwugwu. Ndị ọzọ ụdị iyi-ihe mmetụta n'ịgwa na-agụnye ikanam-photodiode, Ikanam-LASCR, na oriọna-photoresistor ụzọ abụọ. Abụkarị opto-isolators nyefe digital (na-apụ) n'ókè, ma ụfọdụ usoro-ekwe ka ha ga-eji na analọg n'ókè.
Light emitting Diodes ahu nagide siri ike-ala ọkụ technology na-emepụta ìhè site siri ike okwu, nnoo a okporo ọkụ. Nke a na-esetịpụrụ ha iche pụọ ọzọ ìhè na isi mmalite ndị dị otú ahụ dị ka incandescent bulbs (site a agụụ) ma ọ bụ kọmpat fluorescent bulbs (site gas). The isi usoro nke ìhè mmepụta-agba na Band-to-Band recombination ma ọ bụ ụzarị ọkụ.
Kpọmkwem etinyere Optocoupler
Ikanam Digital Tubes
Photoelectric Solid-ala Relay
Send Your Message Iji Anyị